Samachar Batika || News from Nepal » यो बेला महिलालाई सा’रीरीक चाहना बढी हुन्छ !
यो बेला महिलालाई सा’रीरीक चाहना बढी हुन्छ !
एक अध्यनका क्रममा महिलासँग कुन समय यौ’नसम्ब’न्ध राख्दा उनीहरूलाई बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । जसमा उनिहरूको उत्तर थियो- महिनावा’री पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवा’समा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिना’वारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवा’सले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए ।
यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावा’री पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौ’नको ‘मु ड’ बढी हुन्छ । महिनावा’री पूरा भएपछि यौ’नका लागि उत्ते’जित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छ । अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिनावा’रीपछिको तीन दिनमा हुने सह’वासले बढी रमाइलो अनुभूति दिन्छ ।
पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म गर्भा’धारणको सम्भावना बढ्छ । यसैले यस अवधिमा सम्प’र्कको तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ । त्यो सर्वेक्षणमा युवतीहरूले महिनावा’रीपछिका तीन दिन पूर्ण यौ’नानन्दको चाहना राख्ने गरेको बताए ।
उनीहरूका अनुसार, त्यो बेला पाइने यौ’नानन्द अन्य दिनको दाँजोमा निकै सुखद, आनन्ददायक हुन्छ । अध्ययनमा के पनि पाइयो भने, महिनैपिच्छे तीन दिन गरिने सह’वासले वैवाहिक जीवनलाई बढी रमाइलो बनाउने र पा’र्टनरबीच भविष्यमा यौ’नको विषयलाई लिएर दूरी पनि नबढ्ने रहेछ
प्रकाशित मिति ३१ बैशाख २०७७, बुधबार १४:२०